Tourism Gamba Rinovakazve Imwe Yekushanya Nharaunda panguva - angangoita
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » Tourism Gamba Rinovakazve Imwe Yekushanya Nharaunda panguva - angangoita
Bhutan Breaking Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Health News • nhau • vanhu • Peru Kuvhuna Nhau • Dhinda Zviziviso • Kuvakazve • Tanzania Breaking News • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
robin musoro wapfura
World Tourism Network Svondo rapfuura akaremekedza Robin Richman we Steppin Kunze Kunakidzwa, muChicago, USA kupinda mu Horo yeVashanyi Magamba.
Mapereketi ekushanya kubva kuTanzania kuenda kuBhutan nePeru anogona kutenda Robin nekugara mubhizinesi achipfuura nepachirwere nekutungamira chaiko.
Robin Richman anga achishanda nesimba kugadzira chirongwa kuitira kuti zvirongwa zvidiki zvekushanya munharaunda zviwane mikana yekuwana mari inodikanwa panguva ino.
Izvo Virtual Interactive Kufamba Zviitiko, zvinodaidzwa kuti Nyika Inoshamisira padyo padyo uye pachezvako, zvinoshandisa vanhu vakagadzira kana kutora chikamu muzvirongwa zvekushanya munharaunda zvekugovana zviitiko zvavo nevatori vechikamu, zvichivapa basa panguva ino yedenda.
Iye ari kushambadzira chirongwa ichi kune rake runyorwa rwevafambi pamwe nekuwedzera kune vamwe kuitira kuti nharaunda-dzinovakirwa zvirongwa dzigoramba dzichishanda pamabasa avo ekugovana tsika yavo, tsika dzavo nevamwe. Akatanga peji reGo FUND ME peji rekutora zvipo zvekubatsira nemidziyo neinternet kuitira kuti mari zhinji yakaunganidzwa kubva mukunyoresa iende kuzvirongwa zvemunharaunda kwete kungovhara mari.
Iye arikushandawo kutsvaga vatsigiri nevashambadzi vane zvipfupi kushambadzira zvechirongwa ichocho kubhadhara izvo zvinodhura futi. Itariro yake kuunza humwe hwetekinoroji mumba uye zvakare kubatsira dzimwe dzenharaunda idzi kudzidza hunyanzvi muhunyanzvi.
Nepo chinangwa chechirongwa ichi chiri chekuunza mari kune dzimwe dzenharaunda dzinovimba nevashanyi, inogona kuve chishandiso chakakura chekuchengetedza nzvimbo kuti vafambi vatange kufamba zvekare. Iyo zvakare ine mukana wekusvika kune vanhu vasingakwanise kufamba.
Robin aive muenzi kuWorld Tourism Network kuvhura zviitiko svondo rapfuura uye akapa vatungamiriri vekushanya kubva kuTanzania, Bhutan, nePeru muchirongwa chekuraramisa mhenyu uye vakaita kuti vatsanangure mumazwi avo kuti vanoita sei nekushanya chaiko.